PDFs | လမ်းအိုလေး | Page 2
ဦးနှောက်နှင့် အာရုံခံစားမှုဆိုင်ရာ(ကဗျာအီးဘုခ်) (ဇေယျာလင်း)
၂၁ ရာစုရဲ့ ပထမဆယ်စုနှစ်အကုန်ပိုင်း
၂၀၁၀ အောက်တိုဘာ ၊ နိုဝင်ဘာ ၊ ဒီဇင်ဘာလများအတွင်း
ရေးသားခဲ့တဲ့ ကဗျာတွေဖြစ်ပါတယ် ။
ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး ။
၂၀၁၁ နှစ်ကူး ကဗျာစာအုပ်ငယ်လေးအဖြစ်
မင်္ဂလာအဖြာဖြာ ပြည့်စုံပါစေ။ ။
– ဇေယျာလင်း –
Download – 41.2KB
Lyric Poetry : Poetry that expressesaspeaker's emotions or thought and does not tellastory.
Categories: PDFs | Tags: ဇေယျာလင်း, ebook, Lyric Poetry, Zeyar Lynn | Permalink.
နံရံမှာ ငါရေးထွင်း (ခရမ်းပြာထက်လူ)
ဟိုးတုန်းက ဂူနံရံတွေပေါ်၊ သမိုင်းတစ်ခု
စိတ်ဆာသလို သဘာဝကျကျ ငါရေးထွင်း
ဒီနေရာ နေရောင်မရှိ ကလေကချေ၊ မုဒိမ်းကောင်များနဲ့
ဆိုက်ဘေးရီးယား ဟစ်ဟော့တွေ နေသွားဖူးမှာပဲ
ကြောင်မထွက်သွားအောင် ဒီနံရံမှာ အသံတိတ်
သိပ်အရေးကြီးတယ် ငါရေးချင်တဲ့အမှာတွေ ငါချရေး
ငါရေးသမျှ ငါအလွတ်ရဖို့ ငါအသည်းအသန်ကျက်မှတ်
ကြောင်တွေဟာ ကျက်သရေမဲ့စွာ ကျားယောင်ဆောင်ခဲ့ကြ
ကျင်လည်စွာ ကျောက်ဆောင်တွေအနား ငါးကိုဖမ်းခဲ့ကြ
ကြောင်တွေဟာ ကြယ်တွေနဲ့ လှမ်းလှမ်းပြီး
Categories: Cover Arts, Kabyarz | Tags: ခရမ်းပြာထက်လူ, နံရံမှာ ငါရေးထွင်း, Kabyarz, KYPHL, lanolay, modernist poetry | Permalink.